पक्राउ परेका ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीको बयानले प्रहरी नै चकित ! – Nepal Trending
पक्राउ परेका ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीको बयानले प्रहरी नै चकित !
On २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २२:४५
काठमाडौं । ज्योतिषी अर्जुनकुमार थापा क्षेत्रीलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गर्‍याे । पक्राउ परेको क्षेत्रीलाई अहिले काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ । जेठ २८ गतेसम्म प्रलय आउने ठूलो धनजनको क्षति हुने भविष्यवाणी गरेर सर्वसाधारणलाई भ्रम फैलाएको आरोपमा क्षेत्रीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्जुन क्षेत्रीमात्र नभएर विपद्को भविष्यवाणी गरेर सर्वसाधारणमा अफवाह फैलाउने काम अरु कसैले गर्छ भने उनीहरुलाई पनि कारबाही गरिने डिएसपी बोगटीले बताउनुभयो । साथै डिएसपी थापाले यस्ता किसिमका भ्रामक कुराहरुको प्रचार नगर्न मिडियालाई पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । के ज्योतिषी क्षेत्रीलाई ६ महिना कैद र १ लाख रुपैयाँको जरिवाना होला त ? त्यो भने अनुसन्धान र समयले नै बताउँछ ।